May 23, 2018 By Buzz Myanmar News in ဗဟုသုတ, သမိုင်း Tags: ဘုရင်မ, မင်းသား, ဗေဒင်
လူတွေကိုနှိပ်စက် ၊ ခေါင်းဖြတ် ၊အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ ၊ အရေခွံနွာ အစရှိတာတွေဟာ Game of Throme ထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြင်လောကမှာလည်းတကယ်တမ်းရှိခဲ့ဖူးတယ်။အခုဒီမင်း ၆ ပါးကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုးဆုံးမင်း ပါးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
1. Fu Sheng
Fu Sheng ဘုရင်ရဲ့နားမှာဆိုရင် လူတွေက အပြောအဆိုအရမ်းကိုဂရုစိုက်ရတယ်။ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ပျောက်နေတယ် ၊ လပ်နေတယ် ၊မရှိဘူး ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြောရင်သူ့ကိုလှောင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ပဲ။ ဗေဒင် ပညာရှင်တွေက Fu Sheng လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမရပ်ရင် သေခြင်းတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်လို့သတိပေးခဲ့ကြပေမယ့် သူမရပ်ခဲ့ဘူး။လူတွေကို ရက်ရက်စက်စက်ပြုမှု ၊ အရှင်လတ်လတ်အရေခွံနွှာတဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်လူတွေကမကြည်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အရာရှိတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ကလေးတွေ မြေးတွေတောင် ခံရပါတယ်။ပြောရရင်သူ့မိန်းမနဲ့ ယောက္ခကိုမတောင် သတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဘုရင်ပါပဲ။နောက်ဆုံးတော့ သေတဲ့အထိ မြင်းနဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲခံရပြီး နိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။
သူက ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေကြကားတွေထဲက ဒရက်ကူလာများလားမသိဘူး။တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး.။Cald the Imapler ဟာ နိုင်ငံသူရဲကောင်းအဖြစ်ရောမမှာကျော်ကြားပါတယ်။သူဟာ Wallachia ရဲ့မိသားတစ်ပါး ၊ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ကာကွယ်သူ ၊ ရောမသမိုင်းမှာ အရက်စက်ဆုံး အုပ်ချုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ဒဏ္ဍာရီအရဆိုရင် သူ့နဲ့အာဏာပြိုင်ချင်တဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကို သူ့အိမ်တော်ကိုဖိတ်ပြီးတော့ သတ်ပစ်ပြီး ဆူးနဲ့ထိုးထားပါတယ်..ဒီသတ်ဖြတ်မှုဟာ ရန်သူတွေကိုလည်းထိတ်လန့်စေတယ်လို့ Valad III ကယုံထားပါတယ်။
သမိုင်းတစ်လျောက်သူသတ်ခဲ့တဲ့ လူပေါင်း ၈ သောင်းလောက်ရှိမယ်လို့ယူဆရတယ်။စစ်ပွဲမှာကျသွားတဲ့အခါမှာတော့ Valad ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ယူသွားကြပြီး ဆူးပေါ်မှာစိုက်ထားခဲ့ကြပါတယ်။
ယူဂန်ဒါ ရဲ့ အသားသည်လို့သိကြတဲ့ Idi Ami Dada ကတော့ရက်စက်မှုနဲ့ကျော်ကြားတဲ့သူပါပဲ။သူ့ရဲ့ရန်သူလို့ထင်တဲ့သူတိုင်းကို သတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးလေ့ရှိတဲ့ အရူးတစ်ယောက်ပါပဲ။ စစ်သား တွေလည်းဗုံးထိဓါးထိုးခံပြီးသေရတယ်။ပြည်သူတွေလည်း အဆိပ်ငွေ့ဗုံးတွေ မီးရှို့တာတွေခံရပြီး သေဆုံးရတယ်။ပြောရရင်သူက လူသားစားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲ။ညစာတိုင်းမှာလူသားစားပြီးလူသွေးသောက်လေ့ရှိတယ်တဲ့..။သမိုင်းတစ်လျောက်သူသတ်ခဲ့တဲ့သူပေါင်း လူ ၃ သိန်းကနေ ၅ သိန်းလောက်ရှိမယ်လို့ယူဆရတယ်။
4. Ivan the IV
မော်စကိုနို င်ငံရဲ့မင်းသား ၊ ပထမဆုံးရုရှားစစ်ဘုရင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Ivan the IV ဟာ သူ့တစ်သက်တာလုံးစစ်ပွဲတွေဆင်နွဲပြီးရုရှားပြည်ကိုပြန်လည်ပုံသွင်းခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ ရက်စက်မှုကြောင့် စစ်ပွဲတိုင်းမှာ လူအစုလိုက်အပြုံလိုက်သေရတယ်။သူ့ရဲ့မယုံကြည်တဲ့စိတ်ဓါတ်ကြောင့် ဒဏ်ရာရသေဆုံးသူ ၃ ထောင်ကျော်ရှိတယ်…။သူ့ကိုလုပ်ကြံတယ်လို့ယူဆရတဲ့သူတွေကိုလည်း ကွပ်မျက်ပစ်တယ်။ထို့အပြင် သူ့သားကိုတောင် သူသေတဲ့အထိတုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ဖူးတယ်။
5. အင်္ဂလန်ရဲ့ Queen Mary
ကတ်သလစ် တွေပြောကြတဲ့ Blood Mary ဆိုတာကို သိကြမှာပါ…။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက အင်္ဂလန်မှာနေထိုင်သူအများစုက ပရိုတက်စတင့်တွေပဲ။မေရီဟာ ဒါကိုသဘောမကျတဲ့အတွက် ကတ်သလစ်မဟုတ်တဲ့သူအားလုံးကိုမီးရှို့သတ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။မေရီ နဲ့သူ့အဖေကလည်း ငယ်ငယ်ထဲက သိပ်ပြီးတော့ အစေးမကပ်ကြဘူး။သူ့အမေနဲ့အဖေ ဟာ ဗာတီကန် က ချက်ကျောင်း မှာ ကွာရှင်းခဲ့ပြီး သူ့ကိုမျိုးမစစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဟင်နီဟာ နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ဖို့သားတစ်ယောက်လိုချင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး သမီးတစ်ယောက်လိုချင်ခဲ့တာမဟုတ်ခဲ့ဘူး။မေရီ ဟာ ပရိုတက်စတင့်ဘာသာဝင်ပေါင်း ၃ရာလောက်ကိုစီရင်ခဲ့တယ်။ငါးနှစ်အကြာမှာတော့ Elizabethan ခေတ်စတင်ခဲ့တာပေါ့…။မေရီကတော့သူ့ညီမကိုကျေနပ်မှာမဟုတ်ဘူး..ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Elizabeth I ဟာ ပရိုတက်စတင့်တစ်ယောက်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
6. Queen Ranavalona
ကြက်သားစားရတာသဘောကျလား။ဒီ ဘုရင်မ ကတော့ အဆိပ်ခပ်ထားတဲ့ ကြက်အရေခွံသုံးခုကိုစားစေပြီးသစ္စာရှိကြောင်းစမ်းသပ်တယ်။ဒီကြက်အရေခွံတွေအကုန်ပြန်အန်ထွက်လာရင်သစ္စာရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။Ranavalona ဟာ သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုပေမယ့် ဘုရင့် သားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တဲ့အတွက် အခုလိုကံကောင်းသွားခဲ့တာပါ။ဘုရင်ကြီးအနားယူသွားတဲ့အခါ မင်းသား က ဘုရင် နေရာယူရတာပေါ့။ဒါပေမယ့် မင်းသား ဟာလည်းခေါင်းထဲမှာခံစားရတဲ့ဝေဒနာကိုမခံနိုင်တော့တဲ့အတွက် ကိုယ့်လည်ပင်းကိုကိုယ်လှီးပြီးအဆုံးစီရင်သွားပါတယ်။ဘာလို့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားရလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ချစ်ဇနီးမနက်တိုင်းဖျော်တိုက်နေတဲ့ကော်ဖီထဲက ဆိုင်ယာနိုက်သကြားခဲတွေကြောင့်ပေါ့။Ranavalona ဟာသူ့ပုလ္လင်မဆုံးရှုံးစေဖို့အတွက် ဆက်ခံမယ်သူတိုင်းကိုသတ်ရင်သတ်..မဟုတ်ရင်လည်း ထောင်ထဲမှာ ငတ်ပြတ်ပြီးသေအောင် ထားလေ့ရှိတယ်။
Writer – Htet Htet
သမိုငျးတှငျအောငျ ရကျစကျခဲ့ကွတဲ့ မငျးဆိုးမငျးညဈ ( ၆ ) ဦး
လူတှကေိုနှိပျစကျ ၊ ခေါငျးဖွတျ ၊အရှငျလတျလတျမီးရှို့ ၊ အရခှေံနှာ အစရှိတာတှဟော Game of Throme ထဲမှာရှိတာမဟုတျပါဘူး။
အပွငျလောကမှာလညျးတကယျတမျးရှိခဲ့ဖူးတယျ။အခုဒီမငျး ၆ ပါးကတော့ ကမ်ဘာပျေါမှာ ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အဆိုးဆုံးမငျး ပါးပဲဖွဈပါတယျ ။
Fu Sheng ဘုရငျရဲ့နားမှာဆိုရငျ လူတှကေ အပွောအဆိုအရမျးကိုဂရုစိုကျရတယျ။ဘာကွောငျ့လညျးဆိုတော့ ပြောကျနတေယျ ၊ လပျနတေယျ ၊မရှိဘူး ဆိုတဲ့စကားလုံးတှပွေောရငျသူ့ကိုလှောငျတယျလို့ထငျတဲ့အတှကျပဲ။ဗဒေငျပညာရှငျတှကေ Fu Sheng လုပျနတေဲ့ကိစ်စတှကေိုမရပျရငျ သခွေငျးတှအေမြားကွီးဖွဈလာမယျလို့သတိပေးခဲ့ကွပမေယျ့ သူမရပျခဲ့ဘူး။လူတှကေို ရကျရကျစကျစကျပွုမှု ၊ အရှငျလတျလတျအရခှေံနှာတဲ့လုပျရပျတှကွေောငျ့လူတှကေမကွညျတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ လုပျရပျတှကေို အရာရှိတှနေဲ့ သူတို့ရဲ့ကလေးတှေ မွေးတှတေောငျ ခံရပါတယျ။ပွောရရငျသူ့မိနျးမနဲ့ ယောက်ခကိုမတောငျ သတျပဈခဲ့တဲ့ဘုရငျပါပဲ။နောကျဆုံးတော့ သတေဲ့အထိ မွငျးနဲ့တရှတျတိုကျဆှဲခံရပွီး နိဂုံးခြုပျသှားခဲ့ပါတယျ။
သူက ကြှနျတျောတို့ကွညျ့နကွေကားတှထေဲက ဒရကျကူလာမြားလားမသိဘူး။တကယျတော့မဟုတျပါဘူး.။Cald the Imapler ဟာ နိုငျငံသူရဲကောငျးအဖွဈရောမမှာကြျောကွားပါတယျ။သူဟာ Wallachia ရဲ့မိသားတဈပါး ၊ ခရဈယာနျတှရေဲ့ကာကှယျသူ ၊ ရောမသမိုငျးမှာ အရကျစကျဆုံး အုပျခြုပျသူတဈဦးဖွဈတယျ။ဒဏ်ဍာရီအရဆိုရငျ သူ့နဲ့အာဏာပွိုငျခငျြတဲ့ပွိုငျဘကျတှကေို သူ့အိမျတျောကိုဖိတျပွီးတော့ သတျပဈပွီး ဆူးနဲ့ထိုးထားပါတယျ..ဒီသတျဖွတျမှုဟာ ရနျသူတှကေိုလညျးထိတျလနျ့စတေယျလို့ Valad III ကယုံထားပါတယျ။
သမိုငျးတဈလြောကျသူသတျခဲ့တဲ့ လူပေါငျး ၈ သောငျးလောကျရှိမယျလို့ယူဆရတယျ။စဈပှဲမှာကသြှားတဲ့အခါမှာတော့ Valad ရဲ့ခေါငျးကိုဖွတျယူသှားကွပွီး ဆူးပျေါမှာစိုကျထားခဲ့ကွပါတယျ။
ယူဂနျဒါ ရဲ့ အသားသညျလို့သိကွတဲ့ Idi Ami Dada ကတော့ရကျစကျမှုနဲ့ကြျောကွားတဲ့သူပါပဲ။သူ့ရဲ့ရနျသူလို့ထငျတဲ့သူတိုငျးကို သတျပဈဖို့အမိနျ့ပေးလရှေိ့တဲ့ အရူးတဈယောကျပါပဲ။စဈသားတှလေညျးဗုံးထိဓါးထိုးခံပွီးသရေတယျ။ပွညျသူတှလေညျး အဆိပျငှဗေုံ့းတှေ မီးရှို့တာတှခေံရပွီး သဆေုံးရတယျ။ပွောရရငျသူက လူသားစားတဲ့သူတဈယောကျပဲ။ညစာတိုငျးမှာလူသားစားပွီးလူသှေးသောကျလရှေိ့တယျတဲ့..။သမိုငျးတဈလြောကျသူသတျခဲ့တဲ့သူပေါငျး လူ ၃ သိနျးကနေ ၅ သိနျးလောကျရှိမယျလို့ယူဆရတယျ။
မျောစကိုနိုငျငံရဲ့မငျးသား ၊ ပထမဆုံးရုရှားစဈဘုရငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Ivan the IV ဟာ သူ့တဈသကျတာလုံးစဈပှဲတှဆေငျနှဲပွီးရုရှားပွညျကိုပွနျလညျပုံသှငျးခဲ့တယျ။သူ့ရဲ့ကွမျးကွုတျမှုနဲ ရကျစကျမှုကွောငျ့ စဈပှဲတိုငျးမှာ လူအစုလိုကျအပွုံလိုကျသရေတယျ။သူ့ရဲ့မယုံကွညျတဲ့စိတျဓါတျကွောငျ့ ဒဏျရာရသဆေုံးသူ ၃ ထောငျကြျောရှိတယျ…။သူ့ကိုလုပျကွံတယျလို့ယူဆရတဲ့သူတှကေိုလညျး ကှပျမကျြပဈတယျ။ထို့အပွငျ သူ့သားကိုတောငျ သူသတေဲ့အထိတုတျတဈခြောငျးနဲ့ရိုကျနှကျခဲ့ဖူးတယျ။
5. အင်ျဂလနျရဲ့ Queen Mary
ကတျသလဈတှပွေောကွတဲ့ Blood Mary ဆိုတာကို သိကွမှာပါ…။အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက အင်ျဂလနျမှာနထေိုငျသူအမြားစုက ပရိုတကျစတငျ့တှပေဲ။မရေီဟာ ဒါကိုသဘောမကတြဲ့အတှကျ ကတျသလဈမဟုတျတဲ့သူအားလုံးကိုမီးရှို့သတျပဈဖို့အမိနျ့ပေးခဲ့တယျ။မရေီ နဲ့သူ့အဖကေလညျး ငယျငယျထဲက သိပျပွီးတော့ အစေးမကပျကွဘူး။သူ့အမနေဲ့အဖေ ဟာ ဗာတီကနျ က ခကျြကြောငျး မှာ ကှာရှငျးခဲ့ပွီး သူ့ကိုမြိုးမစဈအဖွဈသတျမှတျခဲ့တယျ။ဟငျနီဟာ နိုငျငံကိုအုပျခြုပျဖို့သားတဈယောကျလိုခငျြခဲ့တာဖွဈပွီး သမီးတဈယောကျလိုခငျြခဲ့တာမဟုတျခဲ့ဘူး။မရေီဟာ ပရိုတကျစတငျ့ဘာသာဝငျပေါငျး ၃ရာလောကျကိုစီရငျခဲ့တယျ။ငါးနှဈအကွာမှာတော့ Elizabethan ခတျေစတငျခဲ့တာပေါ့…။မရေီကတော့သူ့ညီမကိုကနြေပျမှာမဟုတျဘူး..ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ Elizabeth I ဟာ ပရိုတကျစတငျ့တဈယောကျဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ကွကျသားစားရတာသဘောကလြား။ဒီဘုရငျမကတော့ အဆိပျခပျထားတဲ့ ကွကျအရခှေံသုံးခုကိုစားစပွေီးသစ်စာရှိကွောငျးစမျးသပျတယျ။ဒီကွကျအရခှေံတှအေကုနျပွနျအနျထှကျလာရငျသစ်စာရှိတယျလို့သတျမှတျတယျ။Ranavalona ဟာ သာမနျလူတဈယောကျဖွဈခဲ့တာဆိုပမေယျ့ ဘုရငျ့သားနဲ့လကျထပျခဲ့တဲ့အတှကျ အခုလိုကံကောငျးသှားခဲ့တာပါ။ဘုရငျကွီးအနားယူသှားတဲ့အခါ မငျးသားက ဘုရငျနရောယူရတာပေါ့။ဒါပမေယျ့မငျးသားဟာလညျးခေါငျးထဲမှာခံစားရတဲ့ဝဒေနာကိုမခံနိုငျတော့တဲ့အတှကျ ကိုယျ့လညျပငျးကိုကိုယျလှီးပွီးအဆုံးစီရငျသှားပါတယျ။ဘာလို့ခေါငျးကိုကျဝဒေနာခံစားရလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ခဈြဇနီးမနကျတိုငျးဖြျောတိုကျနတေဲ့ကျောဖီထဲက ဆိုငျယာနိုကျသကွားခဲတှကွေောငျ့ပေါ့။Ranavalona ဟာသူ့ပုလ်လငျမဆုံးရှုံးစဖေို့အတှကျ ဆကျခံမယျသူတိုငျးကိုသတျရငျသတျ..မဟုတျရငျလညျး ထောငျထဲမှာ ငတျပွတျပွီးသအေောငျ ထားလရှေိ့တယျ။